Xinhua Myanmar - မလှမ်းမကမ်းတွင် မီးလောင်မှုကြောင့် အမေရိကန်လွှတ်တော်ဝင်းတစ်ခုလုံးကို lockdown ချ
အမေရိကန် လွှတ်တော် lockdown
အမေရိကန်နိုင်ငံ Capitol လွှတ်တော်အဆောက်အဦ မလှမ်းမကမ်းတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လွှတ်တော်အား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များချ၍ lockdown ပြုလုပ်ထားသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) North America
“F Streets SE လမ်းနဲ့ I-295 ကုန်းတံတားအောက်မှာ ပြင်ပလုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အတွက် လွှတ်တော် ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ နောက်ထပ် ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မထွက်လာမခြင်း လွှတ်တော်ဝင်းထဲ တိုက်ရိုက်လာရောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရပါမယ်” “ သတိပေးချက်ကို ဖတ်ပါ” “ လတ်တလော Capitol လွှတ်တော်ဝင်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့လူအားလုံးဟာလည်း အခန်းထဲမှာပဲနေကြဖို့ နဲ့ တံခါးပေါက် ၊ ပြတင်းပေါက်တွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေကြဖို့ အကြံပြုပါတယ် ” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ အနီးတွင် အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးယူနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် မီးသတ် နှင့် အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသရေးဌာနက မီးလောင်ကို ငြိှမ်းသတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တွစ်တာမှတစ်ဆင့် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ အိမ်ခြေမဲ့တစ်ဦးက လောင်စာ ဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုးကိုသုံး၍ မီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းမီးလောင်မှုကြောင့် လူတစ်ဦးမီးလောင်ဒဏ်ရာရခဲ့သော်လည်း “ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသောဒဏ်ရာမျိုးမဟုတ်ကြောင်း” ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
အခင်းဖြစ်ချိန်ဓာတ်ပုံများအရ Capitol လွှတ်တော်အဆောက်အဦအတွင်းရှိလူများကို အနောက်ဘက်ခြမ်း(ဝင်ပေါက်) မှတစ်ဆင့် ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုသူများသည် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ဂျိုးဘိုင်ဒန် နှင့် ကမ်မလာဟာရစ်တို့က သမ္မတ နှင့် ဒုတိယသမ္မတများအဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရန် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင်ပြုလုပ်မည့် ၅၉ ကြိမ်မြောက် အမေရိကန် သမ္မတကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအတွက် အစမ်းလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်နေကြသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ ဝါရှင်တန်ကျောက်တိုင်အား လုံခြုံရေးအတားအဆီးများ ဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သော ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် ထရမ့်ထောက်ခံသူများက လွှတ်တော်အဆောက်အဦအား ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အကြမ်းဖက်မှုများကို တားစီးရန်အတွက် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲပြီးဆုံးသည်အထိ လွှတ်တော်ဝင်းတစ်ခုလုံးကို လုံခြုံရေးတင်းကြပ်စွာ စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ Capitol လွှတ်တော်အနီးတွင် ရဲကားများ ရပ်ထားသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ Capitol လွှတ်တော်အဆောက်အဦ မလှမ်းမကမ်းတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လွှတ်တော်အား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များချ၍ lockdown ပြုလုပ်ထားသည်ကို ၂၀၂၁
မြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ ၂၅,၀၀၀ ကို တပ်ချထားပြီး ၊ Capitol လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်းရှိ ရုံးအဆောက်အဦများနှင့် တရားရုံးချုပ် တို့ကို အမြင့် ၇ ပေရှိသော လုံခြုံရေးအတားအဆီးများဖြင့် ဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားကြောင်း ၊ ထို့ပြင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ရန်အတွက် မြို့တွင်း လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် စစ်ကားများ ရပ်တံ့နေရာယူထားကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
(1,8),Photo taken on Jan. 18, 2021 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The entire U.S. Capitol complex was on lockdown Monday morning afterafire was reported several blocks away, Capitol Police said inaletter to lawmakers. (Xinhua/Liu Jie)
(2,3)Security staff are seen near the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States, Jan. 17, 2021. (Xinhua/Liu Jie)
(4) Photo taken on Jan. 13, 2021 shows the Washington Monument seen throughabarrier fence in Washington, D.C., the United States. (Xinhua/Liu Jie)
(5,6,7)Police vehicles are seen near the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States, on Jan. 18, 2021. The entire U.S. Capitol complex was on lockdown Monday morning afterafire was reported several blocks away, Capitol Police said inaletter to lawmakers. (Xinhua/Liu Jie)
Previous Article ဗဟိုအမေရိက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ မြောက်ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုရန် ဂွါတီမာလာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဟန့်တား
Next Article တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ(၈,၀၀၀)နီးပါး အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ခြေလျင်ခရီးဖြင့် ဂွါတီမာလာကို ဖြတ်ကျော်